आजको राशिफल – साउन २१ गते सोमबार (भिडियो सहित) - Pokhara News
होमपेज/राशिफल/आजको राशिफल – साउन २१ गते सोमबार (भिडियो सहित)
आजको राशिफल – साउन २१ गते सोमबार (भिडियो सहित)
पोखरा न्युज श्रावण २१, २०७५
पोखरा न्यूज -२१, साउन ।
वि.सं. २०७५ साउन २१ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अगस्ट ०६ तारिख,
साउन कृष्ण दशमी, कृतिका नक्षत्र, बृष राशिको चन्द्रमा, बृद्धि योग, वणिज र विष्टि (भद्रा) करण
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : कामिका एकादशी व्रत,
भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), कलशचक्र,
राहु काल : बिहान ०७:०९ देखि ०८:४९ सम्म
यमघण्ट : बिहान १०:२९ देखि १२:०९ सम्म
गुलिक काल : दिउँसो ०१:४९ देखि ०३:२९ सम्म
अमृत वारवेला : बिहान ०५:२९ देखि ०७:०९ सम्म र साँझ ०५:०९ देखि ०८:०९ सम्म
लाभ वारवेला : दिउँसो ०३:२९ देखि ०५:०९ सम्म
शुभ वारवेला : बिहान ०८:४९ देखि १०:२९ सम्म
भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य (उत्तरपश्चिम) र ईशान (उत्तरपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने अमला वा सक्खर खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
दिन मध्यमखालको छ । आर्थिक पक्ष सबल नै छ, यद्यपि समय बलियो छैन । गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा राम्ररी मोलतोल गर्नु होला । परिवारमा पाहुनाको चाप बढ्न सक्छ र तिनको आवाभगतमा केही समय र धन खर्च हुने सम्भावना देखिन्छ । मातापिता, मान्यजन वा विशिष्ट व्यक्तिसँग विवादको सम्भावना पनि छ । नातागोता, छरछिमेकी वा इष्टमित्रको जिम्मेबारी वहन गर्नु पर्नेछ । प्राविधिक कारणले आएका समस्या निराकरण गर्न धेरै समय खर्चनु पर्नेछ । गरेका काममा सोचेजति सफलता प्राप्त हुने सम्भावना छैन । आत्मसन्तुष्टि नहुनाले दिक्क लाग्नेछ । व्यापार, व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ ।
प्रयाससाध्य समय छ धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धि हुनसक्छ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुने छ । आत्मविश्वास जाग्नेछ । अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्छ । हाकिम वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । श्रममूलक काममा मन जानेछ । स्वास्थ्य सबल रहने छ । व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजगारीको अवसर आउने छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । काममा मातापिताको सहयोग र सुझाव प्राप्त होला । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ ।
आठौं चन्द्रमाका बाबजुद शुभग्रहको दृष्टि रहेकाले आज झिनामसिना समस्याको सामना गर्दै सफलता प्राप्त हुने दिन हो, तर बढी रौसिनु हुँदैन । झैझगडा र मुद्दामामिलाबाट फाइदा नै हुनेछ । आर्थिकरूपमा सबल बन्नु हुनेछ । आम्दानीका नयाँनयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन् । सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने दिन छ । सुरुमा चिन्ता र छटपटी देखिए पनि दिन छिप्पिंदै जाँदा शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ । धन, धर्म र भाग्यबलमा बढोत्तरी हुने छ । गर्नु नपर्ने काम भए पनि त्यसको उपलब्धी राम्रै हुने सम्भावना छ । तपार्इंको विचार, धारणा र व्यक्तिगत दृष्टिकोणको सबैतिर प्रशंसा हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशकै ठूलो मोबाइल मार्केट महेन्द्रपुलमा सुरु, भदौ १७ देखि मोबाइल एक्स्पो हुने